I-Cottage Resort Nakhonsawan - igumbi eliqhelekileyo - I-Airbnb
I-Cottage Resort Nakhonsawan - igumbi eliqhelekileyo
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguNaruewan
Thina ma kunye pa encinane yokuhlala ikhaya lokuphumla e Nakhonsawan. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide yenziwe ngobunewunewu ngowona mfanekiso ulungileyo, ume kwigadi entle kude nohola wendlela. Sinekhitshi elidityanelweyo, iqula lokuqubha lenkqubo yetyuwa kunye nendawo enoxolo.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide i-Cottage ibekwe kwindawo eluhlaza engqonge intsimi yerayisi. Endleleni ephuma kwindlela ephezulu ye-bypass yephondo laseNakhonsawan.
Lusapho oluqhutywa yi-eco-resort encinci. Sisanda kuvula kwaye silungele ukwamkela undwendwe lwethu kwindawo yokuhlala ekhaya.
Ikhabhinethi eneebhedi ezi-2 zabantu abangatshatanga, ishawari eshushu, umoya-moya, iseti yeTV kunye ne-wifi.
- Ikhitshi lasekuhlaleni, iholo yokutyela kunye nedama lokuqubha lenkqubo yetyuwa.
Sihlala kwipropathi kwaye siya kuba lapho ngokuhlala kwakho.
Sibonelela nge-wifi yasimahla yeendwendwe zethu. Undwendwe lwethu lunokusebenzisa i-wifi kungekuphela nje kwigumbi labo, kodwa nakwindawo eqhelekileyo kwindawo yethu yokuphumla
Indawo yethu yokuphumla ikufuphi nendlela yokudlula. Kodwa ukuba ungathanda ukuya emarikeni, ungaqhuba ukuya esixekweni. Kuthatha malunga nemizuzu eyi-10 ukusuka kwindawo yokuphumla ukuya kwimarike.
Umbuki zindwendwe ngu- Naruewan